Kungani iKingHow - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
IKingHow ingumkhiqizi wazo zonke izikhwama zangaphandle, ezemidlalo yokuzivocavoca, ezokuvakasha kanye nendlela yokuphila. Imikhiqizo yethu eyinhloko ibandakanya i-Baseball Equipment Bags, Fishing Tackle Bag, Hunting Bags, Shooting Bags, Ice Hockey Bags, Camping Bags, Sports Bags, Daily Backpack, Laptop Bags, Golf Bags, Baseball Gloves and so on.We have a long history as a umphakeli wezikhwama nemithwalo yabathengi emhlabeni wonke. Sinikeza uhla oluphelele lwezinsizakalo zombili imibuzo yakho ye-OEM ne-ODM enamanani entengo efektri.
Ukwakha ukwethembana okufanele sikwenze nje ukuthi sobala ngokuphelele kuwe. Ithimba lethu liyatholakala ukukunikeza yonke imininingwane ofuna ukuyazi ngathi, mayelana nenqubo yethu noma imininingwane yokubalwa kwentengo yakho.
Imodeli yethu yebhizinisi isibopho kanye nokusebenza. Siyaqonda ukuthi zingakanani izingozi ezithatha abathengi ngenkathi besebenza nabakhiqizi bezikhwama zaseChina. Amafekthri kufanele aqinisekise kuqala ikhwalithi nentengo enhle.
Izikhwama zethu zingahambisana nayo yonke imigomo yamazwe omhlaba efana ne-TOV, CSCV, SGS, TUV, ITS, REACH njll. Siqinisekisa ikhwalithi yethu, uma sihluleka ukuzibophezela kwakhe sithatha imithwalo yemfanelo ephelele, sibuyise izimpahla noma sikubuyisele imali.
Ngolwazi lwethu olucebile, singaphakamisa izindwangu, izesekeli noma okunye okuklama ukukhulisa intengo ukuze kuhlangatshezwane nomgomo wakho wephrojekthi yesikhwama. Sizokhumbula ubuncane bezidingo zakho zekhwalithi ocwaningweni nakwisixazululo sethu.
Uhlelo lwethu lokukhiqiza nokuphatha oluguquguqukayo luzoqinisekisa kokubili ikhwalithi nobuningi, sinikeza isikhathi esisheshayo sokulethwa embonini kuwo wonke amagumbi emhlabeni. Ngokuvamile isikhathi sethu sokuhola sizoba izinsuku ezingama-35-40.
Ukuze ufinyeleleke, ukuphendula ngokushesha ama-imeyili nemibuzo yakho, ukukusiza ekwakhiweni komkhiqizo wakho futhi uthole izixazululo, lena eminye yemibono iKingHow ethuthukisa ukulethela amakhasimende ethu ukwaneliseka okuphezulu.
Khuluma futhi Shintshanisa
Lapho umthengi eqala ukukholelwa ukuthi sizibophezele ngempela ekwanelisekeni kwabo, singaqala ukushintshana futhi sikhulume ngokujulile kulokho okulindelwe ngumthengi. Ithimba lethu liyatholakala ukukunikeza isiphakamiso nesixazululo.